XISBIYADA UCID IYO KULMIYE OO KU KALA ARAGTI DUWAN HESHIIS KAMA DAMBEYS AH OO MAANTA LAGA GAADHO WADAHALADA SIYAASADDA | WWW.SOMALILAND.NO
XISBIYADA UCID IYO KULMIYE OO KU KALA ARAGTI DUWAN HESHIIS KAMA DAMBEYS AH OO MAANTA LAGA GAADHO WADAHALADA SIYAASADDA
Hargaysa (sl.no) 01 june 2008 – Xisbiyada mucaaradka ah ee UCID iyo KULMIYE ayaa aragtiyo kala duwan ka bixiyey sida ay suurtagal u tahay in maanta la gaadho heshiis kamadambays ah oo lagu soo afjaro wadahadalada siyaasada ee maalmihii u dambeeyey u socday Axsaabta Qaranka.
Arrintana waxay soo shaacbaxday markii xalay ay masuuliyiin labada xisbi ka tirsani goob fagaare ka sheegeen mawqifyo kala duwan oo ku saabsan in maanta heshiis la soo saaro.
Gudoomiyaha xisbiga UCID Faysal Cali waraabe oo ka hadlkayey munaasabad lagu xusayey geeridii Marxuum Cigaal oo lagu qabtay Hotel Ambasador ayaa muujiyey rajo uu ka qabo in wadahadaladaasi ay ka soo baxaan heshiis loo dhan yahay. Balse gudoomiye ku xigeenka labaad ee Xisbiga KULMIYE Cabdiraxmaan cabdiqaadir oo isna ka hadlay munaasabadaasi ayaa muujiyey mawqif kaa ka duwan, isagoo sheegay inaanu jirin wax ilaa hadda lagu heshiiyey, islamarkaana aanu filayn in heshiis la gaadho.
Faysal Cali waraabe oo marka hore arrintaa ka hadlaya ayaa yidhi: “Dastuurkeenu waa qabyo, wuxuu u baahanyahay in dib loo eego, maanta waxa qudha ee aynu haysano, laakiin waynu eegidoonaa inagoo miyir qabna oo danta qaranka eegayna. Wixii aynu aragno inay inoo wanaagsanyihiin waynu daysan doona, wixii kalena waynu ka iska bedeli doonaa ama ha ahaato in axsaabta la furo ama inaynu guurtida dayno iyo inaynu haysano, hadda habkan madaxwenenimadu ma tahay mid aynu ku socon karno waa mid aynu bedeli karno, wax kasta waynu ka doodi karnaa, laakiin waxa inoo laasim ah imika waxaynu haysano inaynu ixtiraamno weeyi, haddii maanta waxaa aynu haysano aynu daafacno wax ka wanaagsan waynu gaadhi, hadii laakiin taa maanta aynu ogoaalnwayno ta berina ogolaan mayn, markaa waxaan leeyahay Distoorka hala ixtiraamo oo aynu wada daafacno.
Arrintan maanta taagan (wuu tagay Saleebaane) waxay ka xumaatay intaa uu imika sheegay oo wadashaqayn iyo walaaltinimo oo looga fadhiyey inay Guurtidu keento ayuunbay Guurtidii meesha ka baxday, meesha inaga khaladayna waa Guurtida oo kaalinteedii ciyaari wayday, maanta murankaasna if iyo Aakhiroba iyaga ayay taagan tahay.
Arrintan maanta taagan horta khatar baynu galnay, waxay Soomaalidu ku maahmaahdaa Mulaca isna wa u dhimasho, carruurna waa u ciyaar, dad siyaasiyiin ah oo meelahaa ka hadla kelmadaha ay lahaayeen wuxuunbay ahaayeen ficiltan iyo hebel ku xumee, laakiin Shacbiga iyo Adduunkaba kahatar bay u ahayd oo sida Mulacaas bay dadku dhiman lahaayeen.
Ficiltanku maaha wax meel inoo wadaya, Qarankii iyo UDUB ma kala baxsana Xisbigii iyo waxaa isku maran Dawladdii, Qarankii iyo Dawladdii oo cidlo ka heli kari mayno UDUB, markaan UDUB doonayno inaan waxyeelo waxa wax noqonaya Qarankii oo ay dhibaato soo gaadhaysaa, markaa waa inaan gacanta ka joojinaa.
Waxa weeyi inta la kala maqan yahay uunbaa dadku col yahay, maalmihii dhowayto fadhiba fadhiga ka dambeeyey ayuu ka fiicnaanayey, kii u dambeeyey baana ugu wanaagsanaa, taasi waxay kuu sheegaysaa inaan waxaan badanaa isku haynaaba lahayn wax la taaban karo oo nuxur leh, balse ay tahay waxaan xaqiiqo ahayn iyo waa la yidhi isku dilo.
Waanu soo dhammayn lahayn arrinta mar hore ee waxay ka hakatay xagga dawladda, beritana Insha Allaahu waxaan jecelnahay inaan soo afjarno, Saddexda Xisbiba jawi wanaagsan ayaa ka muuqda, annagu marka horeba wuu naga muuqdee labada Xisbi ee kaleba.
Waxaanu jecelnahay inaanu xaflad wanaagan samaysano, laakiin waxaa bil shuruud ah doorkan heshiiska Xoghaya UDUB saxeexi maayee waxaa saxeexaya Guddoomiyaha UDUB Madaxweyne Daahir Rayaale Kaahin. Waxaanu jecelnahay inaynu galno doorashooyin kuwii hore ka fiican oo diiwaan garasan, oo qof kastaaba xaqiisa helo.
Waxa kale oo aanu jecelnahay inaanu Komishankana xoojino oo aanu waayo aragnimo siino, annaga oo aan siyaasadaynin”.
Waxa isaguna halkaa ka hadlay C/raxmaan C/qaadir, waxaanu yidhi; “Anigu kuma raacsani Faysal Cali Waraabe Guddoomiyaha Xisbiga UCID hadalkii uu markii dhawayd ka hadalaayey ee ku saabsanaa wada hadalada u socda saddexa Xusbi in si fiican ay ku dhammanayaan sida uu sheegay, waayo maba garanayno waxaanu la tagayno kulanka berri (Maanta), laba qodob ayaa ugu muhiimsanaa oo la isla qaatay inay dawladu meel mariso labadii midna ma hayno, oo golihii ku shaqada lahaaba fasax buu galay.
Mid waxay ahayd deeq bixiyeyaasha oo shardi ka dhigay qodobo in doorashadan laga saaro xeerka diiwaan gelinta, oo waxa ay ahayd in loo gudbiyo Golaha Wakiilada, ta kalena waxay ahayd Golaha Guurtida in dammaanad laga helo haddii uu wakhtigu dhamaado inaanay soo faro gelinayn dooarashooyinka, labadii midna ma hayno, markaa anigu garan maayo waxa kale ee lagu wada hadlayo”.
Source: wargeyska Waaheen.
« MUSHARIXIIN MADAX-BANAAN OO SHEEGAY IN AY U TAR-TAMAYAAN MADAXTINIMADA DALKA JENDAYI FRAZER OO XAQIIJISAY IN MAAMULKA MADAXWEYNE BUSH DOONAYO INAY XAFIIS DIBLOMAASI KA FURTAAN HARGEYSA »